Maamulka gobolka Sanaag oo Soomaaliland uga digay faragelin ay ka wadan gobolkaas (Dhegeyso) – Radio Daljir
Oktoobar 20, 2013 5:40 b 0
Badhan, October 20, 2013 – Maamulka gobolka Sanaag ee Puntland ayaa ka warbixiyey roobab mahiigan ah oo ka da?ay inta badan gobolkaas oo geystay khasaare dhanka xoola ah, maamulka gobolka oo la hadlay radio daljir waxay sheegeen in ay 300 neef roobabku dileen.
Gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamuud siciid Ciyoon waxaa uu sheegay in roobabka ugu badan ay ka curteen gobolka maalmihii tegay isla markaasna dadku ay ku diirsadeen, balse waxaa uu sheegay in roobabku xoolaha ku baa?iyeen deegaanada Ceelbuh iyo Xingalool.
Docda kale gudoonka gobolka Sanaag ayaa ka hadlay xaalada guud ee gobolka, waxaana ay sheegeen in ay jiraan dhaqdhaaqyo ay Soomaaliland ka wadaan meelo ka mid ah isla gobolkaas.
Maxamuud Siciid Ciyoon waxaa uu ugu baaqay maamulka Soomaaliland in ay joojiyaan fara-gelinta ay ka wadaan qaybo ka mid ah gobolka Sanaag, isagoo sheegay in ay la socdaan xaalada guud ee gobolka isla markaasna ay ka hortegi doonaan fara-gelinta qayaxan, sida uu hadalka u dhigay.
DHEGEYSO: Xaliimo sacdiyo oo daljir tirsan ayaa waraystay gudoomiye Maxamuud Ciyoon